China No Hub Pipe, Dabara Adaba, Coupling factory and manufacturers | Ọla & Injinia
Isi Brass Fire fesa isi maka mmiri fesa usoro
Ọ dịghị Hub Pipe, Dabara Adaba, njikọ
Ngwa akụrụngwa eletrik
M&E na-ebupụ ọkpọkọ na akwa akwa, njikọta, ọkpọkọ mmiri na ngwaahịa drainage maka ihe karịrị afọ 30. Enweghị Hub ọkpọkọ na akwa akwa dị ka ọkọlọtọ ASTM A888 American, ọkọlọtọ CSAB70 Canadian na ọkọlọtọ EN877 European. anyị edebanyeghị ọkpọkọ ọkpọ na akwa akwa na IAMPO (yana akara UPC) maka akara "MMCST" na CSA maka akara "HB".
Nkedo usoro: green ájá mgbatị, resin ájá mgbatị, shei ebu nkedo, zọ, ibe ya bụrụ, Centrifugal mgbatị, kwụ akara mgbatị, squeezing mgbatị akara, na-adịgide adịgide ịkpụzi mgbatị, ego mgbatị (mmiri-iko, silica-Sol)
4) njikọ: anyị na-enye
–Germany type non-perforated type na (ma ọ bụ, na-enweghị) welded ụlọ imewe, ụdị na-abụghị perforated na interlock ụlọ imewe;
- - Mpempe akwụkwọ ntanye ndị Britain nwere ụlọ (ma ọ bụ, ịgbado ọkụ),
-Italy ụdị sooks mwekota, Ndenye ntọhapụ mwekota,
–American ụdị perforated na interlock imewe sooks mwekota; perforated mwekota na ahụ; T-bolt mwekota, T-bolt na mmiri mwekota, Unitary mwekota, P-clip na roba….
Nke gara aga: Ngwa akụrụngwa eletrik
4 Ọ dịghị Hub Nkedo Iron Pipe
Ọ dịghị Hub Nkedo Iron Pipe
Enweghị Hub Pipe Fittings
Al / Nkedo Iron Handwheel
Aluminom / Brass Storz Fire sooks Couplings Ma N ...
Brass Fire sprinkler isi maka mmiri sprinkler s ...
Ductile ígwè grooved anwụrụ oyiyi akwa na njikọ ...
Ugbo ala Nkedo akụkụ